You are here: Home somal Kulankii Ciyaareed ee Kooxda Telesom iyo Kooxda Star’s
Hafkii danbe ayaa la isku soo laabtay iyada oo koox waliba la soo tashatay Tababarahoodii koox walibana ugu talo galeen in ay halkaas guusha kala hoydaan.
Cabaar markii ay ciyaatu socotay ayaa waxa kooxda Telesom la timid goolkoodii ugu horeeyay, jawigii ciyaarta ayaa is badalay waxaanu isku badalay mid aad u kulul dhanka ciyaarta iyo dhanka xamaasada labadaba. Kooxda Start’s uma ay suurto galin in ay goolal keensaaan balse aad ayay weerar badan ugu hayeen Kooxda kale, dhanka kale Kooxda telesom ayaa iyadu aad moodaysay iyada oo wakhtigana luminaysa in ay goolkaas ay heleen ay difaacdaan.
Dhowr ciyaartoy oo kakala tirsanaa labada Kooxood ayaa kardhadhkii digniinta ahaa la siiyay iyada oo garsooruhu uu aad u taxadirayay. Waxayna ciyaartaasi guushu ku raacday Kooxda Telesom 1 gool halka kooxda Star’s halkaas guul daro kalahoydeen.